Izibonelelo ezi-6 ezinokubakho zePootropic Sunifiram (DM235) Powder
Izibonelelo ezinokubakho ze-6 zeNootropic Sunifiram (DM235) Powder
1. Ziziphi iiNootropics kunye ne-Sunifiram?
2. I-Sunifiram isebenza njani?
3. Iintlobo ezinhlanu ezinokuba luncedo lwe-Sunifiram
4. Indlela yokusebenzisa i-Sunifiram
5. I-Sunifiram Stack
6. Ziziphi iimpembelelo ze-Sunifiram
7. Ngubani ongasebenzisa i-Sunifiram
Ziziphi iiNootropics kunye ne-Sunifiram?
Ngaba uye wacinga ngokukhenkcela amandla amakhulu kwimemori, ugxininiso, kunye nokungena? Ngamanye amaxesha unokuba ufuna ukufumana uvavanyo lwakho kodwa uzive ngathi uxakeke kakhulu ukuba ungatshisi ioli yezobusuku. Into enhle kukuba, ngoku unokwenza lula ukukwazi ukuqonda ikhono lakho ngexesha elifutshane. Ngokufika kwetheknoloji, unokukwazi ngakumbi malunga nemveliso eya kubeka kuqala.
Ukuba uvakalelwa ukuba ufuna ukuphucula indlela osebenza ngayo ingqondo yakho, kufuneka uzame ukusebenzisa nootropics. I-Nootropic ivela kwigama elithi "NOUS" kunye ne "TROPOS" elithetha ingqondo, itshintshiwe okanye iguqulwe ngokulandelanayo. Ziyaziwa ngcono njengeziyobisi ezikrelekrele eziphucula ukuqonda komntu. Iminyaka, ii-nootropics zaziwa ngokunyusa ubukhali kunye nefuthe lomthamo wengqondo kakhulu.
I-Nootropics ifumaneka ngokufanelekileyo, ngakumbi xa uxhoma ibhalansi kwaye ufuna into yokwenza ukuba ugqame. Abantu abashishini, abafundi, kunye nabalwi bahlala besebenzisa ii-nootropics ukufumana umda wabo. Ngaphandle koko, ii-nootropics zixeliwe ukuba ziluncedo kwizigulana ezinengxaki yokusebenza kwemoto enje ngeHuntington, iParkinson, i-ADHD, kunye nesifo seAlzheimer.
Enye yee-nootropics ezibonelela ngeziphumo ezigqwesileyo Sunifiram, ekwabizwa ngokuba yi-DM-235. Ubume bayo buyafana nobo racetam nootropics kodwa iphindwe kaliwaka ukomelela kune-piracetam. Isiqingatha sobomi bukaSunifiram yiyure enye ukuya kwezimbini.
Le notropic yaqala ukuveliswa ngonyaka we-2000 ngabososayensi baseYunivesithi yaseFlorence e-Itali. Akukacatshulwanga ngokucokisekileyo, kodwa izifundo zezilwanyana eziphambili ezenziwe kuyo zibonisa ukuba i-nootropic esebenzayo enokuthi idlale indima ebalulekileyo ekulawuleni iziphazamiso zengqondo.
I-Sunifiram isebenza njani?
Nangona Sunifiram kuthathwa njenge-piracetam derivative, isakhiwo sawo sahluke ngokuthelekiswa nemida. Ukwahlula kwiklasi yamachiza efanayo ne-piperazine alkaloid.
Nangona isenzo saso singacaciswanga ngokucacileyo, kuyaziwa ukuba isebenze ngokuvuselela umsebenzi we-glutamate receptors. Kwakhona kwandisa umveliso kunye nokukhululwa kwe-acetylcholine, okuyi-neurotransmitter yokufunda.
I-Sunifiram isisiseko sokuqala senxaxheba kuthathwa ngokuba yi-ampakine. Oko kuthetha ukuba xa uwela umnqamlezo wengqondo-yengqondo, ubopha nge-AMPA-type glutamate receptors ezitholakala kwingqondo. Ngenxa yoko, kukho ukukhuthaza ukuveliswa kwe-glutamate, eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-neurotransmitter kwaye inendima yayo isebenze nge-neural.
Glutamate ngumxhasi we-excuratory neurotransmitter enendima yakhe ukukhuthaza iplastiki ye-synaptic. Oko kuthetha ukuba kuphucula ikhono le-synapses yokukwazi ukuphendula ukwanda okanye ukuncipha kumsebenzi.
Umzimba udinga amanqanaba aneleyo we-glutamate ukwenzela ukuba kunokubakho ixesha elide okanye ukuphucula okuqhubekayo kumandla empawu phakathi kwe-neurons.
Kwakhona, amazinga a-glutamate ayimfuneko kwi-hippocampus, inendima yayo kwingqondo kukuvumela ukuhamba kwendawo. Ikwabonelela ngolwakhiwo kunye nokugcinwa kwememori. Kukholelwa ukuba amandla e-Sunifiram okwandisa umsebenzi wokuqonda uyiphumo lokuphucula amandla esignali kwi-hippocampus.
Ngaphandle kokuphucula ukubunjwa kwememori nokukhunjulwa, ama-ampakines anikela ukuvuselela okunyanisekileyo okunceda ukwandisa ukuphazamiseka namandla. Ngenhlanhla, ayibangeli ukungazinzi, kunye nezinye iziphumo ezichaphazelekayo ezenziwa ngokukhuthazwa njenge-amphetamines, i-methylphenidate (Ritalin) kunye ne-caffeine.
Ukongezelela, i-Sunifiram yenza njenge-cholinergic ngokunyusa umveliso kunye nokukhululwa kwe-acetylcholine. I-Acetylcholine ithintela iinkalo ezininzi zokuqonda, kuquka ukukhawuleza ukufunda nokukwazi, imemori, kunye namandla okulungisa iingxaki ezahlukeneyo ngaphandle kokuxhomekeke ekuziphatheni okufundiweyo.
Nangona kungaziwa ukuba i-Sunifiram ilawula njani ukuveliswa kwe-acetylcholine, isifundo sezilwanyana sase-Italiya esenziwe sibonisile ukuba i-DM235 inefuthe elifanayo le-cholinergic njenge-piracetam.
Inkqubo ye-Sunifiram vs.Adderall yesenzo yahluke kakhulu kuba i-Adderall isebenza ngokukhuthaza ukukhutshwa kwe-norepinephrine kunye ne-dopamine, ethi yona inyuse ukugxila komntu kwaye ikhokelele ekuvuseleleni ngokwasemzimbeni nangokwengqondo.
I-Sunifiram, ngakolunye uhlangothi, isebenze ngokufumana i-glutamate receptors ke ikhulise ukubunjwa kwememori.
Iintlobo ezinhlanu ezinokuba luncedo lwe-Sunifiram
Wonke umntu ufanelwe ukufumana ubomi obunelisayo ngesondo. Nangona isondo esithandekayo ngenye yezinto umntu ayenokuyithandayo ixesha lobomi, akunakwenzeka ukuba wonke umntu.
Abanye abantu banokuba neemeko zonke ixesha ngelixa abanye bengashintsha ixesha kunye nexesha. A ukulala ngesondo inokukwenza uxinezeleke emoyeni kwaye uphinde uxhathise ubuhlobo bakho. Ngenhlanhla, kungakhathaliseki ukuba i-sex drive yakho iphantsi kangakanani, kukho uncedo.
Enye yeendlela ezilula onokuzenza ukuba ufuna ukuba nexesha elihle neqabane lakho kukuthatha iSunifiram. Kungenxa yokuba iyakhohlisa ekwenzeni uzive ngathi awukwazi ukumelana neqabane lakho. Uphononongo olwenziwe kumadoda nakwabafazi lubonise ukuba enye yeenzuzo zeSunifiram kukuba inika ifuthe le-aphrodisiac xa uyithatha.
Nangona kungakhange kuboniswe ukuba kubangelwa ukwanda kwe-libido, ezinye iingcamango zibonisa ukuba zikhokelela ekunyuseni kwegazi kwi-penis kunye nesini.
kwakhona, I powifiram powder unokuphucula umgangatho wobomi bomntu ngesondo ngokwenza olunye ulungelelwaniso lokuthintela, ukukhulisa umgudu kunye nokukhuthaza ukukhutshwa kwe-dopamine engaphezulu kunye ne-serotonin (ama-chemical-feel-good) engqondweni.
Ukuphucula okubonakalayo kunye nokuqonda
Namhlanje, amehlo ethu asenokuba neengxaki zokubona ngenxa yokukhathala. Ukukhwankqiswa kwamanani amancinane kunye nemifanekiso kwiiskrini ezincinci, iifowuni kunye neethelevishini nazo zingafaka isandla kuyo. Kona kuninzi ezinye zonyango zingenokuba lula kakhulu kuthi, ngakumbi xa unyanzelekile ukuba ugqoke imibukiso.
Umbono omuhle ubalulekile kuba uhamba ngendlela ende ekuphuculeni ukusebenza komntu. Ukuba umbono wakho usemgangathweni ophezulu, unako ukuphawula utshintsho uze usebenze kubo ngokukhawuleza. Ngaba ucinge ngendlela onokuyandisa ngayo umbono wakho ngaphandle kokuba ugqibe iiglasi ezingaphazamisa umphumo kwaye zenze umonakalo omkhulu wamehlo?
I-Sunifiram ixelwe ukuba inike abasebenzisi bayo umbono oqaqambileyo owenza ukuba ukukhanya nobumnyama kubonakalise ngakumbi. Ikwenza imibala ibonakale ngokungcangcazelayo.
Kwabanye, i-Sunifiram powder (314728-85-3uxelwe ukuba wenza umculo ubandakanyeke ngakumbi ngokwengqondo kwaye unike ukoneliseka ngokweemvakalelo.
Kuyindlela yokuxhaswa kwamandla kunye namandla
Ngaba uzifumene phantsi, unonakele, uluhlaza, okanye uvelisa? Ngaba uziva ngathi amandla aphantsi amanqanaba akurhuqa phantsi kwaye kungabikho nekomityi yekofu okanye yesiselo samandla kubonakala ngathi ikunika ilifti? Ukuba uhamba ngale nto, ngoko unokuzama umphumo we-Sunifiram ukugcina ubuvila bukhona.
Abathathi-nxaxheba abasebenzisa iSunifiram baxela ukuba yongeze amandla abo kwaye yabanika umbono oqinisekileyo. Ukuze kubekhona amandla, ingqondo isebenzisa iswekile edla ngokubonelelwa ziiseli ezibomvu zegazi. Elinye lamachiza athintela ukuhamba kweglucose kwiimbumba zeseli yiPentobarbital. Umyinge ophantsi weSunifiram ubonise iziphumo ezifanayo.
Kwimilinganiselo ephakamileyo, yathintela i-glucose ukuba ishiye iiseli ezibomvu zegazi. Ngoko ke, luncedo kwimilinganiselo ephantsi kuba ikhuthaza ukunyuswa kwe-glucose.
Iphucula ukugxilwa, ukukhuthaza nokucaca kwengqondo
Siphila kwihlabathi eligcinwe izinto ezininzi. Ngamanye amaxesha basenokusixubusha kwaye basilumkele. Ukuzimela ngokunyuka imihla ngemihla, ngexesha elifanayo kunye nokwenza into efanayo kunokusenza sidibanise. Nangona iinjongo ezinamandla kunye nokugxila kubalulekile kuyo yonke imisebenzi enokuyenza, ukufikelela kuzo akunakulula.
Iingcebiso ezininzi indlela onokuphucula ngayo ingqalelo yakho kwaye uxinzelelo lunikezelwe kwiwebhu. Ngelixa ungaqinisekanga ukuba nguwuphi phakathi kwabo ohlangulayo, unokufuna ukwazi malunga nefuthe leSunifiram ngokufanayo.
Isibonelelo esinye seSunifiram kukuba sonyusa kakhulu uxinzelelo, ukugxila, kunye nokucaca kwengqondo. Inceda ekuphuculeni inkuthazo ebalulekileyo ekusingatheni ngempumelelo nasekufezekiseni imisebenzi yengqondo.
Oko kunokuba ngenxa yokuba iSunifiram inyusa imveliso ye-neurotransmitter acetylcholine, indima yayo kukukhuthaza ukubanakho kwengqondo.
Iphucula ukufunda nokukhumbula
Ngelixa abaninzi bakholelwa ukuba awukwazi ukufundisa inja endala iinkohliso, oku kungenjalo xa kuvela kwingqondo yakho. Kungakhathaliseki ukuba ubudala bakho, ubuchopho bakho buyakwazi ukuzivumelanisa nokutshintsha xa kuvela kwimemori nokukwazi ukufunda. Ngokuncedisa okulungileyo, unako ukukhulisa amandla okufunda izinto ezintsha kunye nokuphucula imemori yakho.
Izifundo zezilwanyana zenze ukuba i-Sunifiram ithuthukise isivinini sokufunda kunye nokugcinwa kolwazi. Ngaphandle kokuphucula ukusebenza kwimisebenzi yokufunda, ngokuqinisekileyo yatshintsha i-amnesia eyenziwa ngamakhemikhali. Uphononongo olwenziwe kumntu omdala onobomi lubonise ukuba nakwiizinga elincinci, kusetyenziswe ukuphucula imemori nokufunda.
Omnye umsebenzisi we-Sunifiram wayene-IQ yakhe eyonyukayo ngamanqaku alishumi elinesihlanu emva kokusebenzisa idosi ye-Sunifiram ye-25mg kane ngeveki iinyanga ezine.
Inokunciphisa ubuhlungu bentlungu
Isiphumo se-analgesic esibangelwa yi-Sunifiram kukunceda ukuba isebenze njenge ukukhululwa kwentlungu kunye nobuhle obuza nalo kukuba akuyi kuza nexinzelelo kunye nomxhelo wecala olunexinzelelo lokuba ezinye iintlungu ziyanciphisa isizathu.
Uphando olwenziwe kwiimpuku lubonise ukuba ukuxhaswa kwe-Sunifiram kulibazisile ukusabela kwabo kubushushu, kubonisa ukuba le nootropic ineempawu zokuthomalalisa iintlungu. Esi siphumo saqwalaselwa ukuba siphezulu kwi-Sunifiram idosi ye (0.01 mg / kg) iya kuba ngaphezulu, okanye idosi esezantsi ayisebenzi kangako.
Indlela yokusebenzisa i-Sunifiram
I-Sunifiram yenye yezona nootropics zomeleleyo kwimarike yanamhlanje kwaye, ke, kufuneka zithathwe ngononophelo olukhulu. Kuba khange kufundwe kakuhle, kunzima ukuza nedosi efanelekileyo. Umntu kufuneka, nangona kunjalo, alondoloze idosi esezantsi, ngakumbi ukuba uyisebenzisa okokuqala.
Ininzi iza kwifom yomgubo, kwaye isincomo sokuqala seSunifiram sihlala si-3mg ukuya kwi-4mg sithathwa kathathu ngemini.
Ngokuqhelekileyo, kukho iindlela ezimbini ezahlukeneyo apho ungathatha khona i-Sunifiram powder; Unokukhetha ukudibanisa namanye amanzi okanye uthathe kancinci. Ukuba uyibeka phantsi kolwimi lwakho, uyakuqaphela ukubhabha okuncinci okanye ukurhawuzelela okufana nokuziva kwakho xa ubeke impefumlo eyomeleleyo phantsi kolwimi lwakho.
Iingqinisiso zeelwimi ziboniswe ukuba zisebenze ngokukhawuleza kwaye zinamandla. Uyazi ukuba olu kongezelelo luye lwaqala ukusebenza xa uqala ukuva umphumo oshukumisayo ofana no-Adderall.
Nje ukuba ube ngumsebenzisi weSunifiram onamava, unokunyusa idosi kwi-5mg okanye kwi-8mg ngokuthe ngcembe. Leyo yidosi ephakathi yomsebenzisi onamava ekufuneka eyithathile. Ngaphambi kokunyusa idosi yakho, qinisekisa ukuba uthathe i-nootropic ngaphezulu kweveki kumayeza amancinci.
Akufanele udlule kwi-10mg ngosuku kuba iziphumo zexesha elide zeSunifiram zisafundwa. Ukuyithatha ixesha elide kunokwakha unyamezelo; ngenxa yoko, eyona nto intle ukuyenza kukuqhuba imijikelo yeSunifiram elandelwa zizikhefu.
Isitaki seSunifiram yindibaniselwano yeSunifiram kunye nesongezo esinye okanye nangaphezulu ze-nootropic eziza kuthathwa kunye okanye ngokulandelelana ukufezekisa izibonelelo zokuqonda. Ukuthatha i-Sunifiram kuphela kunika izibonelelo ezizimeleyo kodwa ukuyigcina ngenye indlela ye-nootropic kuthetha ukuba izibonelelo ziyanda. Kodwa ke kufuneka ulumkele idosi ye-Sunifiram ogqiba ukuyithatha ngokudibanisa nezinye ii-nootropics de ube uyazi impendulo yakho kubo.
Nazi iindlela ezahlukeneyo ze-nootropics ezibeka kakuhle kunye ne-Sunifiram ukujongana neengxaki ezibi zengqondo.
L-theanine- Isebenza ngokukhuthaza ukuveliswa kweGABA, i-serotonin kunye ne-dopamine. Ikhusela kwakhona i-glutamine reuptake.
I-Sulbutiamine- Inokubangela i-glutamatergic, i-dopaminergic kunye ne-cholinergic transmission.
Ungakulibala ukuquka umthombo ococekileyo we-choline oza kuba ngumqhubi kunye nokukhusela kwiintlungu zeentloko kunye nezinye iziphumo ezibi.
Le mfumba yeSunifiram yenye yeentlobo ezixhaphakileyo zokungunda. Ukuphucula iziphumo zokuqonda, i-Sunifiram ihlala ibekwa kwindawo enye okanye nangaphezulu kwi-nootropics evela kusapho lwe-racetam njenge Noopept, I-Oxiracetam kunye nePiracetam. Ekubeni i-racetam iyaziwa ukunciphisa umgangatho we-choline kwingqondo, umthombo omuhle we-choline Alpha GPC, i-centrophenoxine okanye i-CDP choline iyacetyiswa.
Ziziphi iimpembelelo ze-Sunifiram
Kuwo wonke umntu efuna iindlela zokuphucula ukusebenza kunye nokuphila ngokubanzi, abaninzi baye bawela izibonelelo ezibangele iziphumo ezibi kwimpilo yabo. Ezinye zingabangela iingxaki zempilo, ngelixa ezinye zingasebenzi ngokupheleleyo umzimba. I-nootropic engcono kakhulu eya kukuvumela ukuba ujabulele ngeenzuzo ngaphandle kokushiya ungenakunceda u-Sunifiram.
Ukuza kuthi ga ngoku, akukho ziphumo ebezingalunganga zeSunifiram ezixeliweyo, kodwa kulungile ukugcina engqondweni ukuba izifundo zabantu kunye nezilingo zeklinikhi azikenziwa. Uphando olwenziwe kwizilwanyana lubonisa ukuba le nootropic ikhuselekile kwaye iyanyamezeleka. Ikwabonisa ukuba nakwidosi ephezulu kunaleyo imiselweyo, ayibeki mngcipheko wetyhefu.
Zonke iziphumo ebezingalindelekanga zeSunifiram ezixeliweyo zincinci kwaye ziyahamba ngokukhawuleza. Babandakanya ukwanda kobushushu bomzimba womntu, ukonyuka kwamathe kunye nokubila. Inokubangela nentloko ebandayo, inyuse ubuntununtunu ekuvuseleleni iaudiyo kunye nokubonwayo, ukugcwala kwempumlo kunye nokuqaqanjelwa sisisu
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Sunifiram zixeliwe ukuba ziyonyuka xa umntu ethatha idosi ephezulu kakhulu ye-Sunifiram okanye ayidibanise nezinye izongezo. Ukuba uthatha idosi ecetyiswayo, akunakulindeleka ukuba ubandezeleke nakweyiphi na imiphumo emibi echaziweyo. Nanini na xa uziva ngathi iintlungu ziyangena, kuya kufuneka uye kwiAlfa GPC.
Ngubani ongasebenzisa i-Sunifiram
Abafundi abafuna ukufunda nokugcina ulwazi oluninzi.
Abantu abahlala befunda iiprogram ezintsha, oko kukuthi, abaprogram bekhomputha kunye nalabo bafuna ukuhlala bekwazi iindlela ezikhulayo ezifana nabaqulunqi bewebhu
Iinjineli kunye nezobugcisa abanomsebenzi obunomntu ofuna ukudala kunye ne-solver yengxaki
Abantu abahlala befuna ukufunda ezininzi ukuze bahlale bekhono kwaye banezakhono
Njengoko kubonisiwe kwinqaku, iSunifiram luhlobo lwe-nootropic eya kuthi ihlangane neemfuno zomzimba wakho ngeenxa zonke. Xa kufikwa kukhuseleko, inemithwalo; emva kwayo yonke loo nto, ayizi kuza nayo imiphumela okuya kukubona ugqirha emva kokuwuthatha. Into emele uyenze kukuba ukhethe i-nootropic efanelekileyo ukudibanisa nayo kwaye usebenzise isixa esifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Umyalelo okwenu namhlanje kwaye ufezekise iinjongo zakho zomzimba nezengqiqo.
I-Phosphotransferases-Intuthuko yoPhando kunye nesicelo: Umshicileli we-2013, iphepha 16-30
Ampakine: Ampakine, Cx717, i-Idra-21, i-Ly-503,430, i-Aniracetam, i-Pepa, i-Farampator, i-Cx-516, i-Unifiram, i-Sunifiram, iincwadi eziqhelekileyo, iphepha 1-36
Ingqondo Yokuhamba: Indlela Ekhoyo Yokuhlaziywa Ngengqondo, ngo-Anthony Simola.